Indlu yasebhishi yaseKiter - I-Airbnb
Indlu yasebhishi yaseKiter
Paros, Egeo, i-Greece
Indlu yasebhishi yaseKiter iyindawo ethokomele yokuphumula. Inendawo emangalisayo yokubuka isiqhingi sase-Antiparos. I-villa yethu itholakala ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo (700M) ukusuka e-Pounta, indawo enhle kakhulu yokubeka ikhayithi. Finyelela isiqhingi sase-Antiparos ngezinyawo, singu-100M kude nesikebhe.
I-sauna inikezwa ngokwesidingo, ngemali eyengeziwe.
I-villa yethu engu-90 sq. m, eyakhiwe eminyakeni engu-15 edlule, eyayikade iyindlu yethu yokuvakasha yomndeni e-Paros. Yakhiwe futhi ihlotshiswe ngokucophelela ngokulandela amasiko endawo. Ibanga layo ukusuka ebhishi elincane ngu-70M. Uvulandi wayo unombono omuhle wokuphumula. Eceleni kwe-balcony, ikamelo lokuhlala livikelwe futhi linombono ofanayo. Ama-balcony amabili, azungeze indlu nengadi echumayo kuzokunikeza umoya ojulile wasemaphandleni ase-Greece aqabulayo. Ilungele izivakashi ezingu-6, indlu yethu inemibhede emibili elala abantu ababili, emakamelweni kanye nosofa ophenduka umbhede olala abantu ababili endaweni ehlanganyelwayo. Yindlu enobungane bezingane ebungaza njalo ngonyaka umshana wami. Inombhede ophephile wengane yakho (sicela ubuze ngaphambi kokufika kwakho).
Indawo ezungeze idolobha elikhulu inokuthula nokuzola, ilungele ukuphumula.
Ibhishi eliseduze lingu-70M kude, ibhishi elihle elinesihlabathi elivame ukuthula.
I-100M kude ne-villa iyihhotela elihle elinendawo yokubhukuda enkulu, enikeza amasevisi ayo amaningi ezivakashini.
60m kude uzothola isikhungo sokutshuza (Eurodivers).
Isikhumulo sezindiza sikazwelonke se-Paros singu-10 imiz kude ngemoto.
Ngibuze noma yini engingakusiza ngayo ngaphambi, phakathi noma ngemva kokuhlala kwakho. Ngizokujabulela ukukusiza!
Mina nomkami sizotholakala ukukunikeza amacebiso afanele. Siphila eduze nendawo yakho unyaka wonke.